Warbixin: Sida Cristiano Ronaldo ugu Guuleystey Ballon d’Or 2017+Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Warbixin: Sida Cristiano Ronaldo ugu Guuleystey Ballon d’Or 2017+Sawiro
(08-12-2017) Weeraryahanka kooxda Real Madrid, Cristiano Ronaldo ayaa ku karbaashay xidiga naadiga Barcelona, Lionel Messi abaal marinta Ballon d’Or markiisii shanaaad – iyo sanadkii labaad oo xidhiidh ah.
Guushani waxay ka dhigaysaa 32 jirka reer Portaqiis inuu la sinmay 30 jirka reer Argentina Messi, oo tirade ugu badan haystay biladan, markii u dambeysay ee uu hantiyaana ahayd 2015.
Messi ciyaaryahankii hore uga barbar ciyaari jiray weerarka Barcelona ee Neymar, wakhti xaadirkanse ka tirsan Paris St-Germain, ayaa galay kaalinta saddexaad.
Xili ciyaareedkii hore, Ronaldo wuxuu ka caawiyey Real Madrid inay ku guuleysato horyaalka naadiyada Yurub ee Champions League iyo Horyaalka Spain ee La Liga markii u horeysay tan iyo sanadii 2012.
Bilada sanadkan 2017 Ballon d’Or ee Ronaldo hantiyey waxay ku barbar tolmaysaa kuwii uu soo qaaday sanadihii 2008, 2013, 2014 iyo 2016, Messina wuxuu noqonayaa ciyaaryahanka kaliya ee abaal marintan soo qaadayay sanadihii kale oo dhan tan iyo 2009 kii.
“Tani waa shayga aan ku hamiyo sanad kasta,” ayuu yidhi, kadib markii lagu gudoonsiiyey figta sare ee Taalada astaanta caasimada Faransiiska Paris ee loo yaqaano – Eiffel Tower -.
“Waxaan u mahad celinayaa ciyaaryahanadayda Real Madrid, waxaa kale oo aan u mahad celinayaa dhamaan dadkii kale ee iga caawiyey inaan heerkan gaadho.”
Maxay Tahay Abaa Marinta Ballon d’Or?
Abaal marinta Ballon d’Or waa abaal marin ay cida ku guuleysanaysa soo xushaan 173 saxafi oo ka kala socda dhamaan dalalka adduunka.
Wargeyska ciyaaraha ka faalooda oo ka soo baxa wadanka Faransiiska ayaa abaal marintan sanad kasta soo bixinayay tan iyo 1956 kii, laakiin lix sanadood ayay ku midoobeen xidhiidhka kubadda cagta aduunka ee FIFA, waxaana sanadahaas 6 da ah la siinayay laacibka sanad kasta ugu fiican aduunyada, magaciina waa laga dhigay “Fifa Ballon d’Or.
Laakiin, qorshahaas, waxay FIFA soo af jareen oo midowgaas ka baxeen bishii September 2016.
Iyadoo abaal marin FIFA u khaas ah la bixiyey bishii October, taas oo Ronaldo loogu caleemo saaray xidigii aduunka sanadka ee raga ‘world’s best male player’.
Ballon d’Or xidigihii ku guuleystay: Ronaldo & Messi oo iska haystay tan iyo 2008